Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2012-Taliska Guud ee AMISOM oo si rasmi ah ula wareegay Hoggaanka Ciidamada Kenya ee ku sugan Koonfurta Soomaaliya
Munaasabaddan oo ka dhacay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in 4664-askari oo Kenyan ay si rasmi ah uga mid noqdeen ciidamada AMISOM bishii Juun ee lasoo dhaafay, kuwaasoo tirada AMISOM ka dhigay 17,000 oo askari.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Abuubakar Diarra iyo taliyaha AMISOM, Jen. Andrew Gutti, iyadoo kulankan uu ka dhigayo in ciidamada Kenya ay hoggaan ahaan iyo howlgal ahaan ay ka mid yihiin AMISOM.
"Waxaan soo dhaweynaynaa walaalaheenna Kenya qaybta ay ka qaadanayaan dadaalka lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed," ayuu yiri dajire Diarra oo arrintan uga mahadceliyay shacabka iyo xukuumadda Kenya.
"Hadafka ugu weyn ee Midowga Afrika waa in la dhiirri-geliyo in si wadajir ah looga shaqeeyo ammaanka iyo deggenaashaha dalalka xubnaha ka ah ururka. Waxaa cad in Al-shabaab oo ka mid noqotay Al-Qaacida aysan khatar ku ahayn Soomaaliya oo keliya, balse ay khatar ku yihiin dalalka gobolka oo dhan oo ay Kenya ku jirto," ayuu dajiruhu hadalkiisa raaciyay.
Dajire Diarra ayaa xusay in Kenya ay taariikh u tahay ka qaybgalka dadaalka lagu soo celinayo nabaddii iyo kala dambeyntii Soomaaliya, isagoo sheegay in sidoo kale ay dalkeeda ku hayso dad badan oo qoxooti Soomaaliyeed ah.
"Ka mid noqoshada ay ciidamada Kenya ka mid noqdeen AMISOM waxay xoojin u tahay sidii xasilloonida Soomaaliya laga isaga kaashan lahaa, loona dhisi lahaa nabad-galyo la isku halleyn karo, looguna geyn lahaa deegaannadooda dadka u baahan gargaraka bani'aadamnimo," ayuu yiri darjire Diarra.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay ka mid noqonayaa kuwa ka socda dalalka, Burundi, Uganda, Jabuuti ee ku sugan Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena ay dhawaan kusoo biiri doonaan ciidammo ka socda dalka Sierra Leone.
Howlgalka AMISOM ayaa ka billowday Soomaaliya sannadkii 2007, iyadoo markii ugu horreysay ay ciidamadaas gaareen meelo ka baxsan Soomaaliya oo ay ka talinaysay Xarakada Al-shabaab oo urur dagaal kula jira dowladda Soomaaliya.